> Resource> DVD> Olee otú Mee a DVD ngosi mmịfe
Foto na vidiyo nwere ike mesmerizing obi gị, ma otu nwere ike ghara inwe a magburu onwe obi na-adị na-enweghị na-ekiri vidiyo na slideshows. The slideshows ga ogologo gị ịtụnanya na-echeta na ya nnukwu ihuenyo. Ma i nwere ike atụgharị ọ bụla oge nke ndụ gị n'ime ebe nchekwa site tinye n'ọrụ a dvd ngosi mmịfe.
Otu nwere ike ajụjụ: esi mee ka a dvd ngosi mmịfe na oru oma ụzọ? Ọfọn, ọ dị nnọọ mfe-eme ka a dvd ngosi mmịfe site tinye n'ọrụ dị iche iche na-akpali akpali na atụmatụ nke DVD ngosi mmịfe Nrụpụta. Ịbụ nna ukwu nke gị ngosi mmịfe site na iji nke a magburu onwe software na-eme ka pụtara video DVD slideshows nke foto, videos na music. Ebe i nwere ike:
1 Import ma dezie gị faịlụ
The software na-arụ ọrụ na abụọ ụdịdị: elu mode na ụkpụrụ mode. Ị nwere ike ịhọrọ a mode ka malitere dị ka gị mkpa. Mgbe ahụ hazie gị ngosi mmịfe site na-agbakwụnye ọkacha mmasị gị foto ma ọ bụ vidiyo site na nanị ịpị "Tinye faịlụ" button.
Jiri "Dezie" nhọrọ-eme ka a dvd ngosi mmịfe na-achọsi ike mgbanwe gị hụrụ n'anya foto na ọ dịkwa ike ịgbakwunye pụrụ iche utịp dị ka Old Foto dị, osisi, na Inverse, ect. Tọghata gị foto n'ime ọhụrụ onye na akuku, bugharia na pụrụ iche utịp ngwaọrụ. Gị niile oke!
2 Personlize na DVD ngosi mmịfe
Gaa hazie taabụ-eme ka gị DVD ngosi mmịfe ọzọ pụrụ iche. Ka ihe atụ, i nwere ike ịmepụta dvd ngosi mmịfe nke elu àgwà site na-agbakwụnye Intro / Ebe E Si Nweta Obere vidiyo. Na-eme ka ọ na ihe ịtụnanya site na iji tọn atụmatụ ugbu ke software.
Mgbe ahụ akọwa onye ọ bụla na ihe ọ bụla idaha site na-agbakwụnye ederede na-ekpughe kpọmkwem akụkọ n'azụ na foto. Tinye ọkacha mmasị gị mpempe music site na ịpị "Music" button, ma ọ bụ pịa "Voice N'ime" button idekọ gị onwe gị olu na-agwa foto akụkọ.
3 Ekekọrịta gị e kere eke
Na-aga "Mepụta" taabụ na-ebipụta gị DVD ngosi mmịfe on YouTube dị nnọọ site na ịpị "Share ka YouTube". Ọ bụ dịkwa nnọọ mfe-ekiri vidio na mkpanaka gị na site tinye n'ọrụ na òkè nhọrọ. N'ezie, ị nwekwara ike ịkọrọ gị ịtụnanya e kere eke na ndị ọzọ site e-mail, ikenye na internet ma ọ bụ jiri kere photos dị ka gị nchekwa ihuenyo.
Ị na-ahụ, ọ bụ ezi mfe ike a DVD ngosi mmịfe na DVD a ngosi mmịfe Ndinam software. Mụta ihe banyere nke a DVD ngosi mmịfe Ndinam software.
DVD ngosi mmịfe sample kere na DVD Slideshow Builder Deluxe
Jụụ Video Editor: Olee otú Tinye jụụ mmetụta ka Video
Movie Onye kere maka Mac: Olee ka a Movie na Mac
Best breeki aka ntọala maka Universal aga-eme